यसरी भयो कुसुन्तीमा 'इन्काउन्टर', को हुन् मारिएका प्रविण खत्री? :: PahiloPost
यसरी भयो कुसुन्तीमा 'इन्काउन्टर', को हुन् मारिएका प्रविण खत्री?
7th August 2017 | २३ साउन २०७४
काठमाडौँ : सोमबार दिउँसो ललितपुरको कुसुन्तीमा प्रहरीको इन्काउन्टरमा लागूऔषध कारोबारी भनिएका २५ वर्षीय प्रविन खत्री मारिएका छन्।
इन्काउन्टरमा मारिएका खत्री केही वर्षदेखि लागू‌औषध र हातहतियारको कारोबारी रहेको प्रहरीको दावी छ।
सोमबार दिउँसो महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोली डिएसपी अजय केसीको नेतृत्वमा खत्रीको घर ललितपुरको कुसन्ती १३ स्थित अरुणिमा बस्तीमा पुगेको थियो। प्रहरीलाई खत्रीले लागूऔषध र हतियारको कारोवार गरिरहेको सुराकी हात परेपछि अपरेसन गरेको हो।
प्रहरीले खत्री घरभित्र नै परिवारसँग बसिरहेको थाहा पाएपछि चारैतिरबाट घेरा हाली घरभित्र छिर्न लाग्दै गर्दा आफूलाई प्रहरीले घेरा हालेको सुइँको पाए।
प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्ने भएपछि उनले दुई हातमा चाइनिज पेस्तोल बोकेर साढे २ तले घरबाट प्रहरीलाई गोली चलाउदै हाम्फाले। उनले गोली चलाएपछि आत्मरक्षाको लागि प्रहरीले पनि गोली चलाएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले बताए।
घरबाट हाम्फालेका खत्री झाडीमा पछारिए। प्रहरीका अनुसार उनले आफूसँग भएको पेस्तोलबाट एक फायर गरे जुन उनको कन्चटमा लाग्यो। दोस्रो फायर भने मिस भयो।
प्रहरीले गोली चलाउँछ भन्ने प्रेसर भएर पनि उनले गोली चलाएको हुनसक्ने एसएसपी अमात्यले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा बताए। एउटा गोली भने उनको पेस्तोलमा लोड अवस्थामा नै थियो।
कन्चटमा गोली लागेका खत्रीलाई प्रहरीले नै तत्काल ललितपुरको पाटन अस्पताल लग्यो। तर खत्री बाँच्न सफल भएनन्। खत्री यसअघि पनि लागूऔषधसहित पक्राउ पर्दा बालिकाको घाँटीमा हतियार राखेर भाग्न सफल भएका थिए।
को हुन् इन्काउन्टरमा मारिएका प्रविण खत्री ?
सोमबार प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका प्रविण खत्री आफै लागू‍औषध प्रयोगकर्ता हुन्। खत्रीले केही वर्षदेखि ब्राउन सुगर लिँदै आएको प्रहरी बताउँछ। अत्याधिक लागूऔषध प्रयोग गरेपछि खत्रीलाई परिवारले सुधार केन्द्रमा समेत राखेको थियो । सुधार केन्द्रमा रहँदा उनले ‍लागूऔषधी खान नपाएपछि बाथरुमको पानीको टुटी नै खाएका थिए। त्यससमय उनको अपरेसन नै गर्नुपरेको थियो।
खत्री डिएसपी अवदेश विष्टका भान्जा हुन्। उनकी श्रीमती त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छिन्।
अत्याधिक लागूऔषध सेवनका कारण उनको फोक्सो खराब रहेको छ। गत असोजमा लागू ‍औषध नियन्त्रण व्युरोले खत्रीलाई लागुऔषधीसहित पक्राउ गरेको थियो।
त्यसपछि भने उनी गोप्य रुपमा लागूऔषधको कारोवारमा लागेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ।
इन्काउन्टरमा मारिएका प्रवीणका पिता